Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/avokoa
Proverbe 6 Adaladala manam- -benty , ka izay hita rehetra venty avokoa . [Houlder 1895 #1633]
Proverbe 74 Aiza ny tany hadina no dia ho mby ao an-karona avokoa ? [Cousins 1871 #29, Nicol 1935 #42]
Proverbe 75 Aiza no dia ho anao avokoa ny valala manatody sy fandria-maraina ? [Houlder 1895 #671]
Proverbe 125 Akoholahy maneno an-drova, ka samy te-hoderain' ny tompony . [Rinara 1974]
Proverbe 667 Ara manao famakiloha anaty katsaka: ka izay mitranga rangahy avokoa . [Houlder 1895]
Proverbe 833 Aza atao lamban’ ny matory : izay mahatsiaro manintona. [Cousins 1871 #357]
Proverbe 1104 Aza manao papango lahy anaty katsaka , ka tsy misy lahy afa-tsy izaho na izay mivoaka babany avokoa . [Rinara 1974 #556]
Proverbe 1514 Aza ny vady an-trano no atao tsy ho zavatra, fa izay mihaingo tsara avokoa . [Houlder 1895 #1805, Veyrières 1913 #1274]
Proverbe 1643 Be ny goaika fa tsy fantatra izay lahy sy vavy , fa izay homana ny voanjo no tonafana mafy . [Rinara 1974 #879]
Proverbe 1866 Efa resy , ka mbola minaonaona ihany : izay hitany dia ilazany avokoa . [Veyrières 1913 #3337]
Proverbe 2427 Ho anao avokoa va Ibabay sy Lohavohitra ? [Veyrières 1913 #2287, Houlder 1895]
Proverbe 2480 Hosahanana avokoa va Ibabay sy Lohavohitra ? [Cousins 1871]
Proverbe 2617 Izaho misakeli-pary , mibaby akondro, miloloha tantely : izay entiko mamy avokoa . [Cousins 1871 #1160]
Proverbe 2635 Izay aleha rehetra maneno sahona avokoa : Maromena hahatsiravina , Antsakalava hahatahotra. [Houlder 1895]
Proverbe 2660 Izay mahay manana dia manana indroa , fa izay tsy mahay manana , dia foan-tanana . [Veyrières 1913]
Proverbe 2977 Lakana tsy mifidy andriana , fa izay arendriny lena daholo. [Rinara 1974 #1685]
Proverbe 3356 Malahelo miantsena: izay mangirana rehetra atao ho vola avokoa . [Veyrières 1913 #2515, Cousins 1871 #1448]
Proverbe 3551 Manao filohan’ Idrako : ny mitranga , am--bavako avokoa . [Cousins 1871 #1535]
Proverbe 4445 Mitoto vary lena ka samy miady ho lohany . [Rinara 1974 #2484]
Proverbe 4905 Ny anadahy toy ny vody fahitra : na soa na ratsy izay manjo lazaina azy avokoa . [Veyrières 1913 #1158]
Proverbe 5052 Ny fanambadiana tahaky ny harongana : izay tsongoina toa mena avokoa . [Veyrières 1913 #1219]
Proverbe 5401 Ny olo-marina ohatra ny vato lava sorona: izay ametrahana azy mety avokoa . [Cousins 1871]
Proverbe 5498 Ny sandry be tsy ody aina , ary ny hatanorana tsy ody faty; fa samy ho faty avokoa . [Cousins 1871 #2414]
Proverbe 5575 Ny teny tahaka ny harongana : izay tsongoina mena avokoa . [Cousins 1871 #2493]
Proverbe 5587 Ny tetika tsy araka ny atao ary izay voakasa tsy ho vita avokoa . [Rinara 1974 #3297]
Proverbe 6500 Sandry be tsy hery; fahatanorana tsy ody faty. [Houlder 1895 #1928]
Proverbe 6725 Tahaka ny katsaka: izay iainana misy ta-hanimba avokoa : maitso , hanin’ ondry ; mibaby , ian-tsampazan’ ny alika ; main-dambana , itomanian’ ny ankizy . [Cousins 1871 #2959]
Proverbe 8072 Vary vokatra eo Ibetsimitatatra : na tompony na tsy tompony , samy mitazana. [Rinara 1974]
Proverbe 8355 Vorondolo miseho andro, ka izay mahita mipaoka avokoa . [Veyrières 1913 #179, Rinara 1974 #5045, Cousins 1871 #3748]